सरकारीलाई विद्यार्थी टिकाउने चिन्ता | Educationpati.com
२०७६ बैशाख ३ गते ०९:१२मा प्रकाशित
काठमाडौं । डेढ दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना अभियान सरकारले यस वर्ष पनि सञ्चालन गर्‍यो। तर भर्ना भएका विद्यार्थीलाई स्कुलमा टिकाइराख्ने वातावरण नबन्दा सबै नागरिकलाई शिक्षा दिने सरकारको लक्ष्य अपूर्ण भएको छ। विद्यालय भर्ना हुने उमेर पुगे पनि विविध कारणले गर्दा पढ्न नपाएका बालबालिकालाई लक्ष्य गरेर अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि करिब दुई सातासम्म अभियान सञ्चालन गरिन्छ। तर अभियान अवधिभर शिक्षकहरू विद्यालयमा कम उपस्थित हुने र उपस्थित भए पनि विद्यालयमै बस्नेलगायत कमजोरीका कारण विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा ल्याउन सकिएको छैन। विद्यार्थी विद्यालय जान नसकेका क्षेत्रका स्थानीय समस्या के छन् ? विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? तीमध्ये कुन समुदायका बालबालिका धेरै छन् ? उनीहरूको पारिवारिक समस्याका कारण विद्यालय आउन नसकेका हुन् वा अन्य कारणले भन्ने विषयमा भर्ना अभियानको नेतृत्वकर्ता शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर भएर अध्ययन गर्न सकेको छैन। ‘राज्य अहिले केही गर्छु भनेर लागेको त छ’, कोइरालाले भने, ‘तर पुरानै तरिकाबाट बाजागाजा बजाउँदैमा विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन्।’